Mazuva ese Chemical Giredhi Carbomer
Mazuva ese Chemical Giredhi Polyethylene Glycol
Zvakatipoteredza Shamwari Rubber Yakapararira
Zvakatipoteredza zvine hushamwari Rubha Yemukati Mould Kuburitswa Mumiriri
Mishonga Giredhi Polyethylene Glycol
Chemishonga Giredhi Carbopol
Polyethylene Glyeol 300 danda ...
Zita: Carbomer Carbopol Carbomer 10 ipfu chena, yakakwenenzverwa polyacrylic acid inoiswa polymerized mune inoshatisa-inosarudzwa cosolvent system. Yayo yega-yekunyorova zvivakwa uye yakaderera guruva inoita kuti ive nyore kwazvo kushandisa kuti ibudirire kugadzirisa. Icho chinonyanya kushanda rheology modifier inokwanisa kupa yakakwira viscosity uye mafomu anopenya akajeka magels kana hydro-doro majiroji nemafuta. Kuyerera kwayo kupfupi, kusiri-kudonha zvivakwa kwakanakira kunyorera senge yakajeka magel, hydroalch ...
Zita: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer1342 Carbopol1342 is a hydrophobically modified cross-linked acrylate copolymer. Iyo ine yakareba viscous kuyerera chivakwa, inopa yakanakisa kuomesa uye kusimisa kugona kunyanya mune anoshanda mashandiro masisitimu uye mafomu anopenya akajeka magels. Ichi chivakwa chinoita kuti chigadzirwa chinyatso kukodzera kune aqueous mhinduro kana kupararira kune yakanyungudutswa munyu. Uye zvakare, yakavandudza kuenderana mukukora nekupa goho kukosha ...
Zita: acrylic acid (ester) / C10-30 alkyacrylate muchinjika-wakabatanidzwa polymer Carbomer 1382 inoshandisa cyclohexane uye ethyacetate semasolvents, ayo anogona kupa kumiswa kumwechete uye kugadzikana kuita seCarbomer1342. Seye inogadziriswa nemvura rheologicamodifier, ine yakasarudzika kuomesa mashandiro uye kupenya kwechiedza mumvura-alcoholosystem; Panguva imwecheteyo, chigadzirwa chine yakanakisa kushivirira munyu uye kuenderana kwakanaka neanoshanda; Inonyanya kukodzera kutapisa gel. Mvura Alcohogel, ...
Zita: Carbomer990 Carbopol990 Carbomer 990 Carbopol 990is muchinjiko-wakabatana polyacrylate polymer, yakaiswa polymer mu co-solvent system ye ethyl acetate uye cyclohexane. Iyo inokwanisa kupa yakakwira viscosity, yakanakisa kuomesa uye kumisa mashandiro neepasi-dosi. Kuyerera kwayo kupfupi (kusiri-kudonha) zvivakwa kwakanakira kunyorera senge yakajeka magel, hydroalcoholic gels, makirimu. Kana ikasadzikiswa nealkali inogadzira inopenya mvura yakajeka kana mahydroalcoholic gels uye mafuta. Carbomer990 iri cr ...
Zita: Carbomer Carbopol Tsananguro Carbomer 276 is a crosslinked polyacylate polymer ine yakasimba yekunyorovesa kugona, inoshanda senge yepamusoro-inoshanda & yakaderera-dhivhaji thickener, inosimudza uye inomisa mumiriri. Iyo inogona kusimudzira goho kukosha uye rheology yezvinhu zvemvura, nekudaro zviri nyore kuwana isinga tsindiki zvigadzirwa (granual, mafuta kudonha) yakamiswa pane yakaderera dosi. Inoshandiswa zvakanyanya muHI & I kunyorera uye iwo mafomomo uko kugadzikana kweiyo oxidative uye nemutengo kugona ndizvo zvakakosha zvinodiwa. C ...
Zita: Carbomer676 Carbopol676 Carbomer 676 Carbopol 676 polymer inonyanya kukamurwa polyacrylic acid polymer. Iyo ine pfupi yekuyerera hunhu uye ine yakanyanya kukwirira viscosity yekuita Inokurudzirwa kuti ishandiswe mune otomatiki dhishi kuchengetedza, yakaoma nzvimbo yekuchenesa, yekuchengetedza imba yekuchenesa masystem, gelled mafuta uye mamwe akajairika maindasitiri masisitimu. Iine yakanaka viscosity kugadzikana pamberi pechlorine bleach uye ine hunyanzvi hwekuita mune yakakwira pH masisitimu. Zvimiro Uye Bhenefiti Pfupi kuyerera gorosi ...
Mould Yijie R-99 Yemukati Yekuwedzera Mould Kuburitsa Agent Series01
Zvinoumbwa: simbi sipo-yakavakirwa musanganiswa weyakagadzirwa syntactant Kunze kwekutarisa: chena hupfu kana zvimedu zvekuchengetedza Nguva: makore maviri Pasuru: Yakaumbika Kraft bepa rakarukwa pepa bhegi Net Kurema: 25 kg / bhegi Inoshanda Rubber Rudzi Natural rabha (NR), butadiene rubber (BR ), Styrene-Butadiene Rubber (SBR), Isoprene Rubber (IR), Neoprene Rubber (CR), Butyl Rubber (IIR), EPDM, chlorosulfonated polyethylene rabha (CSM), Fluororubber (FKM), nitrile rabha (NBR) uye zvekare zvekare inogona kuiswa kumatai ...
Zita: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer2020 is a cross-linked polyacrylic acid copolymer. Iyo ine yakareba viscous kuyerera chivakwa, inopa yakanakisa kuomesa uye kusimisa kugona kunyanya mune anoshanda mashandiro masisitimu uye mafomu anopenya akajeka magels. NM-Carbomer2020 ine kugona kunyorova nekukurumidza asi hydrate zvishoma nezvishoma, kusaburitsa pamwero wakaderera. Ichi chiitiko chinoita kuti zvive nyore kupararira uye kupomba uye kubata mukati mekuita nekuda kwayo yakaderera yekupararira viscosity isati yati neutralizati ...
Zita: Carbomer996 Carbopol996 Carbomer 996 Carbopol996 is a cross-linked polyacrylate polymer. Iyo inoshandiswa seyakanyanya-inoshanda rheology modifier, inokwanisa kupa yakakwira viscosity, yakanakisa kuomesa uye kumisa mashandiro neepasi-dosi. Iyo zvakare inoshandiswa zvakanyanya muO / W lotions uye makirimu seyakanakisa kumisa mumiriri. Zvimiro uye Zvakanakira Kupfupika kuyerera zvivakwa Yakakwira viscosity Kumira kumbomira, kuomesa uye kudzikamisa kugona Kunorumbidzwa Zvishandiso.Bvudzi rekutemera gels Moisturi ...
Zita: Carbomer 981 Carbopol 981 Carbomer 981 Carbopol981 is a cross-linked polyacrylate polymer. Inoita zvakafanana neCarbomer 941. asi yakaiswa polymer muco-solvent system ye ethyl acetate uye cyclohexane. MaFicha Uye Bhenefiti Inotaridzika yakareba yekuyerera chivakwa Zvakanyanya kushanda pane zvine mwero uye zvakaderera kusangana. Kujekesa kwepamusoro Kwakakurudzira Zvishandiso Misoro yenyowani, makirimu uye magezi Jekesa gels Zvishoma ionic masisitimu Fomula Mirairidzo Chaicho chinokurudzirwa chipimo pa 0.2 ~ 1.5%. Ku dis ...
Zita: Carbomer Carbomer 980 Carbopol 980 is a cross-linked polyacrylate polymer, polymerized in co-solvent system of ethyl acetate uye cyclohexane. Iyo inokwanisa kupa yakakwira viscosity, yakanakisa kuomesa uye kumisa mashandiro neepasi-dosi. Kuyerera kwayo kupfupi (kusiri-kudonha) zvivakwa kwakanakira kunyorera senge yakajeka magel, hydroalcoholic gels, makirimu. Kana ikasadzikiswa nealkali inogadzira inopenya mvura yakajeka kana mahydroalcoholic gels uye mafuta. Zvimiro Uye Bhenefiti Pfupi flo ...
Zita: Carbomer 941 Carbopol 941 Carbomer 941 Carbopol941 is a cross-linked polyacrylate polymer with anoshamisa long-flow property in mucilage. Inopa kujekesa kwakanakisa mumagels uye inopa isingagumi emulsions uye kuturika pane yakaderera viscosity, kunyangwe neionic masisitimu. Carbopol941: kuyerera kwenguva refu, yakaderera viscosity, kujekesa kwakakwirira, zvine mwero kuramba ion uye shear kuramba, yakakodzera gel uye emulsion. Zvimiro Uye maBhenefiti Akatanhamara akareba ekuyerera epfuma Zvakanyanya kushanda pane zvine mwero uye tarira ...
Qingdao Yinuoxin Nyowani Zvinyorwa Co., Ltd.